Itoophiyaan embaasiishee gara Yerusaalemitti 'hin jijjiirtu' - BBC News Afaan Oromoo
Waajjirri Ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa haala yeroo irratti dhaabbilee miidiyaaf ibsa kenneen, waa'ee baqattoota Liibiyaa keessaa, walitti dhufeenya Itiyoophiyaa fi Masrii akkasumas dhimma Yerusaalem irratti xiyyeeffateera.
Dubbi himaan waajjirichaa Obbo Mallas Alam gaaffii daldala garbaa Libiyaarratti gaafatamaniif wayita deebisan, ''Waliigaltee Gamtaaleen Awurooppaa fi Afriikaa irra gahan irraa ka'uun, mootummaan Liibiyaa daldala garbaa kana dhaabsiisuuf itti gaafatamummaa qaba,'' jedhan.
Kun ta'uu baannaan garuu, Itiyoophiyaa dabalatee biyyoonni biroos tarkaanfii fudhachuuf dirqamu jedheera.
''Baqattoota Liibiyaa keessatti gurguraman keessaa lammiileen Itiyoophiyaa keessatti akka argaman bira geenyee jirra,'' kan jedhan dubbi himaan kun, ''Hojiin lammiilee Itiyoophiyaa Liibiyaa keessan jiran adda baasuu xumuramuun, sanada kennuurratti argamna. Fedhii isaaniitiinis gara biyyaa deebisuuf qopheedha,'' jedhan.
Dallaalota daldala garbaa irratti hirmaatan keessaa, lammiileen Itiyoophiyaa keessatti akka argamanis bira geenyeerra jedhan.
Waliiti dhufeenya Itiyoophiyaa fi Masrii gidduu jirurrattis kan haasa'an dubbi himaan kun, Ministeerri Muummee Haayilamaariyaam Dassaalany dhiheenyatti gara Kaayiroo imaluun, waa'ee biyyoota lamaanii akka mari'atanis ibsaniiru.
Obbo Haayilamaariyaam Kaayiroo imaluun paarlaamaa biyyattiirra haasa'a akka tolchan, miseensonni paarlaamaa 19 mallattoo walitti qabaa jiru kana jedhan dubbi himaan kun, ''paarlaamaa miseensota 19 qabu keessa, namoonni 19 mallattoo walitti qabuun isaanii waan yaaddessaa miti,'' jedhaniiru.
Gama biraatiin ammoo, ALH Sadaasa 6, 2010 irraa qabee, Saawudiin namoota sanada seera qabeessa tahe hin qabne biyyaa baasaa akka jirtu kan ibsan Obbo Mallas, hanga Sadaasa 26 gidduutti lammilee Itiyoophiyaa 10,000 ol ta'an deebi'uu isaanis himan. Kanneen deebi'an ammoo carraa hojiin uumamaafi akka jirus eeraniiru.
Dhumarrattis waa'ee Yeruusaaleem haasa'an - ''Murtoon Pireezidant Tiraamp murtee Ameerikaati, nuun hin ilaallatu,'' jedhan.
''Dhimma Israa'eliifi Paalastaayin irratti, ejjannoon Itiyoophiyaa, biyyoonni lamaanuu walii galuun mootummaa ofiin ofbulchan uumuun, nagayaan akka jiraataniifi,'' jedhan.
Itiyoophiyaanis emabaasiishee Tel-aviiv irraa Yerusaalemitti jijjiiruuf karoora akka hinqabne kan dubbatan Obbo Mallas, ''Itiyoophiyaanis ta'e Gamtaan Afriikaa, waldhabdee biyyoota lamaan gidduu ilaalchisee, nageenyi furmaata waaraa akka ta'e amanu,'' jechuun xumuran.